We.com.mm - Friday 13th ဆိုတာဘာလဲ .. ဘာကြောင့် လူတွေကြောက်ကြတာလဲ
ဒီနေ့က စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ ... နည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်လို့ဆို့ရမလား ?
ဘာကြောင့်လဲဆို အနောက်နိုင်ငံက လူတွေတော်တော်များများအစွဲကြီးပြီး အယူသည်းကြတဲ့ သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်မို့လို့ပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ဒီအယူအဆ ကသိပ်မရှိသေးပေမယ့် ဥရောပ၊ အမေရိက နဲ့ အခုဆိုရင် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းတို့၊ တရုတ်တို့၊ တောင်ကိုရီးယား တို့လိုနိုင်ငံတွေမှာတောင် ဒီအယူအဆလေးကို လက်ခံကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေရှိလာတယ်။
အဲဒီအစွဲက အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ အယူအဆကနေလာပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာ ( The Last Supper ) မှာ ခရစ်တော်ရဲ့ဘေးနား၊ ယေရှုခရစ် နဲ့ အတူစားသောက်နေတဲ့ သာဝကပေါင်း ( ၁၃ ) ဦးရှိတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ခရစ်တော်ဟာ ကားစင်တင် ( Crucifixion ) သတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ခရစ်ယာန်အယူအဆမှာ ၁၃ ဂဏန်းဟာ အိုမန် ( Omen ) ဆိုတဲ့ ခွေးမိစ္ဆာကို ကိုယ်စားပြုသတဲ့။ အိုမန် ဆိုတာ လက်တင်အမေရိကတွေလက်ခံထားတဲ့ ကာရီဗျူးစ် ဆိုတဲ့ ငရဲခွေးကြီးနဲ့လည်း အယူအဆချင်းတူတယ်။
နောက်တစ်ခုက သောကြာနေ့။ သောကြာနေ့ ဆိုတာလည်း ခရစ်ယာန်အယူနဲ့ဆိုရင် အမှောင်ကျတဲ့နေ့၊ မကောင်းတဲ့နေ့ ပဲ။ ယေရှုခရစ်ဟာ သောကြာနေ့ မှာ ကားစင်တင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်လို့ သောကြာနေ့ ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ နေ့အဖြစ် ရှေးခရစ်ယာန်တွေက သတ်မှတ်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းအစွဲတွေကြီးလာပြီး သောကြာနေ့တိုင်း ပရိတ်ရေ ( Holy Water ) နဲ့ သန့်စင်ခြင်းပွဲတွေဘာတွေလုပ်လာတဲ့အတွက် ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ အမေရိကန်လူမျိုး ကပ္ပတိန် ဝီလျံဖောင်လာ ဆိုသူက Thirteen Club ဆိုတဲ့အဖွဲ့တည်ထောင်ပြီး သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်အစွဲကိုဖျောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သတဲ့။ ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။
အဲ့ဒီအတွက် ၁၃ ဆိုတာကို သူတို့တွေက မကောင်းတဲ့ဂဏန်းအဖြစ်ယူဆကြတာ။
အစွဲဆိုတာ ကြာတော့အမြစ်တွယ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ သောကြာနေ့၊ ၁၃ ရက်မှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတစ်ခုခုကြုံခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားပေါင်း ၇.၇ ဘီလျံရှိတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက လူပေါင်း သန်း နဲ့ချီပြီး သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်မှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတာ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့တော့ကြုံမှာပဲ။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီး နောက်လူတွေက သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်ဟာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့နေ့လို့ အယူစွဲသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်လည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။
သောကြာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံမှာ အစွဲတွေရှိကြတယ်။ ဥပမာ သောကြာနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ ကြောင်နက်တစ်ကောင်မြင်တာမျိုး။ သောကြာနေ့မှာ နံရံကပ်ထောင်ထားတဲ့ လှေကားအောက် ( တြိဂံပုံဖြစ်နေတဲ့ကြား ) ထဲက ဖြတ်မိတာမျိုးဆို ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျသတဲ့။ နောက်ပြီး အခန်း နံပါတ် ၁၃ တို့၊ တိုက်နံပါတ် ၁၃ တို့၊ ၁၃ ထပ်တို့ဆို လူသိပ်မနေချင်ကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ အကြောက်တရားကြောင့်ပါပဲ။ ဘယ်လောက်ထိတောင်လူတွေ သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်ကိုကြောက်သလဲ၊ အယူသီးသလဲဆိုရင် Friday the 13th ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို လူသတ်ကားတောင်ထွက်လာတဲ့အထိပဲ။ Jason ( ဂျေဆင်န် ) ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ်လူသတ်သမား ( ဘယ်လိုသတ်သတ်မသေတဲ့ငတိ ) က လူတွေကို ကြက်ကလေးဌက်ကလေးသတ်သလို လိုက်သတ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပေါ့။
သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံဆိုးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်။ ဥပမာ ၁၉၄၀ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တုန်းက ဂျာမန်လေတပ် အင်္ဂလန်ကို ဗုံးလာကြဲတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ ၁၉၇၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ညက ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်ပြီး လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော်သေတယ်။ ၁၃၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့မှာ ဂျေရုစလင်ကို သွားတဲ့ ဘုရားဖူးပေါင်း ၃၀၀၀ ကို ကာကွယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ မြင့်မြတ်သောစစ်သည်တော် ( Knight Templer ) ၂၀၀ ကို ပြင်သစ်ဘုရင် ဖီးလစ် ၅ က ဖမ်းဆီးပြီး သတ်ဖြတ်တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲဆိုရမလား ... ကံဆိုးတယ်ပဲပြောရမလား ... ဒါတွေဟာ သောကြာနေ့၊ ၁၃ ရက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေပါ။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုမျိုးပဲ။ အကြောက်တရားဆိုတာ မျိုးစေ့သေးသေးလေးကနေစတယ်။ ကြာလာလို့ အမြစ်တွယ်လာတဲ့အခါ နှုတ်ရခက်တယ်။ အခု Friday 13th ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုပြောပြော တိုက်ဆိုင်မှုတွေကနေ လာတဲ့ အကြောက်တရားပါပဲ။ အမြစ်တွယ်နေတဲ့အရာကို နှုတ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ အချိန်ယူရတယ်။ အမြစ်ကိုကျွတ်အောင်နှုတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး အမြစ်တွယ်နေတဲ့အစွဲကို ချွတ်ဖို့ကျ တယ်လည်းခက်သားလားဗျာ။
All images paid and credited to Pinterest and Free Stock Photos.
ခွေးလိုက်ခံရပြီဆိုဘာလုပ်မလဲ .. ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) ခု
ပုတုတုအရပ်ကနေ ရှည်စေဖို့ ပုံမှန်နာနတ်သီးစားဖို့လိုအပ်